WhatsApp ကို Web မှအကောင်းဆုံးရယူရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက် | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignatius ခန်းမ | | social networking, WhatsApp ကို
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလက်ကိုင်ဖုန်းများသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအသုံးများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်လာသည် လက်တွေ့ကျကျဘာမှလုပ်ဓာတ်ပုံများမှသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဏ်အကောင့်များကိုကြည့်ခြင်း၊ အီးမေးလ်များပို့ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းအထိ…စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသောအရာအားလုံးကိုမိုဘိုင်းစက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော်အခါ, ဒီကိရိယာ သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်နေကုန်သုံးရန်မသင့်ပါ အဓိကအားဖြင့်အရွယ်အစားပြissuesနာများကြောင့်တက်ဘလက်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာရေးနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ပကီးဘုတ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်မျက်နှာပြင်၏ထက်ဝက်ကို virtual keyboard မှအသုံးမ ၀ င်ဟုပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်နာရီများစွာအကုန်အကျခံနေမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်ပြီးပြန်ကြားပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလက်ခံရရှိသည်။ WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်စီးပွားရေးအကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါကပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ မိုဘိုင်းမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြင့်တုန့်ပြန်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 WhatsApp ကို Web ကဘာလဲ
2 QR ကုဒ်များနှင့် WhatsApp ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ
3 WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
3.1 WhatsApp ဝက်ဘ်ကို iPhone မှဝင်ရောက်ပါ
3.2 WhatsApp ဝက်ဘ်ကို Android မှရယူပါ
4 WhatsApp ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်
4.5 Emoticons နှင့် kaomojis ပို့ပါ
4.10 မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်ပို့၊ ရှေ့၊ ကြယ်၊ ဖျက်၊
5 WhatsApp ဝက်ဘ်၌မှောင်မိုက်သော mode ကိုသက်ဝင်စေပုံ
6 WhatsApp ဝက်ဘ်ဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နည်း
7 WhatsApp ဝက်ဘ်ဖြင့်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နည်း
9 ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ
WhatsApp ကို Web ကဘာလဲ
WhatsApp ဝက်ဘ်သည် application မဟုတ်ဘဲဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည် WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ရရှိစေသည် ကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့်တက်ဘလက်တစ်ခုမှမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဒီစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်း၏။ WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မက်ဆေ့ခ်ျများကို၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်မသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အတွက်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမတ်ဖုန်းပေါ် မူတည်၍ လုံးဝ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ် မူတည်၍၊ ဒီအစဉ်အမြဲအပေါ်ဖြစ်သင့်သည်WhatsApp ဝက်ဘ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ပို့သော၊ လက်ခံသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှတဆင့်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် WhatsApp အကောင့်ရှိသည့်စမတ်ဖုန်းသည်အမြဲတမ်းလည်ပတ်နေရန်လိုအပ်သည်။
QR ကုဒ်များနှင့် WhatsApp ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ
WhatsApp သည် c အတွက် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်နောက်ဘက်ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသား WhatsApp ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူ၏ပြောဆိုမှုအားလုံးကိုဝက်ဘ်ဗားရှင်းနှင့်ထပ်တူပြုရန်ထက်၊ ထင်ဟပ်ရန်ထက်၊ ယခင်ကဏ္inတွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း WhatsApp ဝက်ဘ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း application ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် web.whatsapp.com ကိုရယူပါ ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကနေ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်မဟုတ်ဘဲ desktop ဗားရှင်းကို browser မှဖွင့်ရန်တောင်းဆိုရမည်။ မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော QR ကုဒ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
WhatsApp ဝက်ဘ်ကို iPhone မှဝင်ရောက်ပါ
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့၊ configuration များ အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ပါ.
ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်း၏ကင်မရာဖြင့်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်ဌ QR ကုဒ်ပြသ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။
WhatsApp ဝက်ဘ်ကို Android မှရယူပါ
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ ကိုနှိပ်ပါ ဒေါင်လိုက်သုံးမှတ် လျှောက်လွှာ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိသော WhatsApp Web ကိုရွေးချယ်ပါ
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်၏မျက်နှာပြင်သို့ရောက်အောင်ပို့ပေးသည် QR ကုဒ်ကိုပြသသည်.
WhatsApp ကတည်းက Browser များအတွက် WhatsApp ၏ပထမဗားရှင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဤသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့သည် နှင့်ယနေ့တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်လျှောက်လွှာတွင်တွေ့နိုင်သည့်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ browser မှနှင့် WhatsApp ဝက်ဘ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုပုံပြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်မည်သည့်ရုပ်ပုံမဆို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ရာသောအချိန်တွင်သူနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မရရှိလျှင်၎င်းကိုသူတို့၏အဆက်အသွယ်များအားလုံးကိုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများကိုစီမံခန့်ခွဲပါ ၎င်းသည် WhatsApp ဝက်ဘ်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်းမရှိသဖြင့်ခွင့်ပြုချက်များအားသက်တောင့်သက်သာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးပရိုဖိုင်းပုံများကိုထည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း၊ ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများမျှဝေခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အုပ်စုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ web ဗားရှင်းတွင်တွေ့ရှိရသည်
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသောအုပ်စုများစွာသည်နှုတ်ဆိတ်နေပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖော်ပြသည့်အခါသို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်မှသာကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။ WhatsApp ၏ web ဗားရှင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် အသံတိတ်ခြင်းနှင့်ပင်ချက်တင်ဖျက်ခြင်း။
သင်တစ် ဦး ကိုနှစ်သက်လျှင် WhatsApp မှအသံသင်၏ဝက်ဘ်ဗားရှင်းဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းအချို့သည်သူတို့ကိုအလွန်မုန်းသော်လည်းဂရုမစိုက်သည့်တိုင်သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပထမအကြိမ်သင်ပြုလုပ်ပါကဘရောင်ဇာသည် WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုလုပ်နိုင်ရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်တောင်းလိမ့်မည် မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးပါ အော်ဒီယိုပို့ရန်အတွက်။
Emoticons နှင့် kaomojis ပို့ပါ
WhatsApp မှ Emoticons ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိပါ။ ဇာတိနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မိုဘိုင်းဗားရှင်းရှိ icon များနှင့်အတူတူပင်ရှိသည် Koamoji ကိုသုံးပါWindows Key + command မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောသင်္ကေတများကြောင့်၊ (အမှတ်) ။
ကွန်ပြူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ပုံတွေ၊ ကျနော်တို့က WhatsApp ကတဆင့်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းဗားရှင်းတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအတာနှင့်တူညီသောကန့်သတ်ချက်များဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေကြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတွင်ဝက်ဘ်ကင်မရာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ပုံတစ်ခုပို့ပါ WhatsApp ၏ web ဗားရှင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၊ လာမည့်အခန်းတွင်ရှင်းပြသည့်အတိုင်း WhatsApp မှ (သူတို့အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း) မှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်ဤကင်မရာကို အသုံးပြု၍ မရပါ။
WhatsApp ၏ဝဘ်ဆိုက်သည်ဖိုင်များပို့ရန်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ 100MB န့်အသတ် ၎င်းတို့ကိုမျှဝေသောအခါ Telegram အတွက် ၁.၅ GB အထိရောက်ရှိနိုင်သောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
WhatsApp ဝက်ဘ်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ရယူပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်း, ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အုပ်စုရှိမရှိ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အုပ်စုလိုက်စကားဝိုင်းနှစ်ခုလုံးမှမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်းဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်၊ ခဏကြာပြီးသောအခါ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလက်ခံသူမှမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ချက်တင်မှသာဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲသတိရသည်။
မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်ပို့၊ ရှေ့၊ ကြယ်၊ ဖျက်၊
အနည်းဆုံးတော့ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထွက်ခွာခဲ့ကြသည် သိသာလုပ်ဆောင်ချက်များကို WhatsApp ရဲ့ web version ကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတယ်။ ဥပမာ - မက်ဆေ့ခ်ျတွေပြန်တာ၊ ပို့တာ၊ အုပ်စုလိုက်ခွဲတာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုဖျက်တာစတာတွေပါ။
WhatsApp ဝက်ဘ်၌မှောင်မိုက်သော mode ကိုသက်ဝင်စေပုံ
WhatsApp သည် o တွင်နောက်ဆုံးတည်ဆောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းရှိအမှောင်ထုစနစ်အခမဲ့ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ WhatsApp ကိုယ်တိုင်က web version အတွက်မှောင်မိုက်တဲ့ mode ကိုကမ်းလှမ်းဖို့အနှောင့်အယှက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး (ထိုင်ပြီးထိုင်ပြီးစောင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ)
ကံကောင်းထောက်မစွာ, WhatsApp ၏ဤဗားရှင်း, ဒီ feature ကိုထည့်သွင်းရန်မလိုဘဲရှောင်ရှားရန် browser ၏အမှောင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့သည် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကကွန်ပြူတာ (သို့) browser ပေါ်မှာသာ web activate လုပ်ဖို့ဒါကို activate လုပ်ရမယ်။
WhatsApp ဝက်ဘ်မှတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Windows နှင့် macOS နှစ်ခုလုံးအတွက်လုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်သည့် Messenger application ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်။Google Chrome (သို့) Microsoft Edge Chromium ဘရောင်ဇာကိုသုံးပါ.
တစ်ဦးကိုဖန်တီးရန် WhatsApp ဝက်ဘ်မှတဆင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
အိုင်ကွန်ခလုတ်၏ညာဘက်ရှိကလစ်ကိုနှိပ်ပါ sala (ကင်မရာဖြင့်ကိုယ်စားပြု) ။
နောက်ပြီးသူက Messenger ကိုသုံးပြီးဖန်းတီးဖို့ဖိတ်တယ် Messenger ကိုသွားပါ.
အဲဒီအချိန်တုန်းကအမြဲတမ်း Chrome (သို့) Microsoft ရဲ့ Edge Chromium ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook သို့မဟုတ် Messenger အကောင့်၏အချက်အလက်များကိုထည့်ပါ.
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အခန်းဖန်တီးပါကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ကြားထားသူအားလုံးသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (သို့) Messenger တွင်အကောင့်တစ်ခုမလိုဘဲလူ ၅၀ အကန့်အသတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့အရောင်တင်ကြစို့ အခန်းကိုရိုက်ပါ အခန်းထဲဝင်သောအခါပြသမည့် link သို့ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေမည့်သူများရှိမည့်နေရာတွင်ပါလိမ့်မည်။
အဲဒီ link ကိုကျနော်တို့ရှိသည် လူတိုင်းနှင့်အတူမျှဝေပါ သူတို့ကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရန့်ထဲကိုဝင်စေချင်တယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ အသံခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ WhatsApp မှတစ်ဆင့် WhatsApp သည် browser မှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုခွင့်ပြုမည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုစမ်းသပ်နေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုသင့်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
WhatsApp ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တန့်ပြီး၎င်းကိုထပ်မံအသုံးပြုရန်မစီစဉ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အစည်းအဝေးအားလုံးကိုပိတ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတိထားမိစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဦး ကကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ရန်လုပ်ထားသည်။
ကဏ္allများအားလုံးသို့မဟုတ်အချို့စက်ပစ္စည်းများ၏ပိတ်ဆို့မှုများအားလုံးကိုပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ရမည်၊ ၎င်းသည် Sessions ကိုညွှန်ပြသည့်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ အသုံးမပြုတော့သောအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရမည်။ ကျနော်တို့သံသယရှိပါက မည်သည့်အသင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ၎င်းတို့အားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်း WhatsApp Web သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အတွက်အသုံးပြုသောအရာအားလုံး၏ထင်ဟပ်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီသည် ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းအပေါ်ထင်ဟပ်နေသည် အဲဒါကိုပြန်ဖျက်လို့မရဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » WhatsApp ကို Web မှအကောင်းဆုံးရယူရန်အတွက်အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်
အွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့နှင့်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များကို download လုပ်ရန်
Instagram ပုံပြင်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်လေးဘယ်လို download လုပ်မလဲ